मास्टरले सुर्को बारी खनेर ड्याङ पनि पारिसकेपछि मास्टरनी प्लास्टिकका झोलामा दुई पोका लिएर आइपुगिन् । सानामा मुलाको बीऊ थियो र ठूलामा युरिया मल । बोल्दै आइन् परैबाट, “आ ! एकैचोटी काम सकेर जाऊँ है बूढा ! को आउँछ यहाँसम्म मल हाल्न फेरी ! त्यही पनि यति थोरै मुलालाई !”
कुटो भुइँमा राखेर त्यसैको बिँडमा बस्दै मास्टर बोले, “होइन मास्टरनी, यसो नगरौँ है ! यति नाथे मुलाकालागि के बारी बिगार्नु ! युरियाले बारीमा बाझोँपन ल्याउँछ । अर्को वर्ष यो भन्दा बढी मल हाल्नुपर्छ । मुलाका लोभले आघौँ मकै पनि नाफल्ला फेरि । प्रत्येक कुरामा युरिया नै खान्छौँ हामी पनि । आफूले नै फलाएर खाने कुरामा त नहालौँ है । हाम्रो शरीर पनि अलिअलि गर्दै बिग्रिन्छ । महिलाहरूलाई त युरियाले झन् असर गर्छ भन्छन् ।”
मास्टरनीले कुरा खाइन् र बारीलाई बाँझोपनबाट जोगाउँदै उसै मुलाका बीऊ छरिन् र दुबैजना घर फिरे । खाना खाइसकेपछि गलेका दम्पती झकाउन लागेका थिए । मास्टर अर्ध निन्द्रामै बोले, “ए मास्टरनी ! आज त तेश्रो दिन हो क्यार है । त्यो बहत्तर घण्टे गर्भनिरोधक चक्की खाइहाल त । कि अस्तिको जस्तै भोलि पनि एक सय बीस घण्टे खाने ? ”